बन्द हुने स्थितिमा पुगेको विद्यालय गाउँलेले ब्युँताए - नेपालबहस
गृहपृष्ठ › समाचार › गण्डकी प्रदेश
बन्द हुने स्थितिमा पुगेको विद्यालय गाउँलेले ब्युँताए
| ८:१५:१० मा प्रकाशित
२६ माघ, बागलुङ । गत शैक्षिक सत्रमा सरस्वती प्राथमिक विद्यालयमा जम्मा पाँच जना विद्यार्थी भर्ना भए । तीमध्ये पनि दुई जनाले पछि अर्कै विद्यालय रोजे । विद्यार्थी सङ्ख्या शून्यतिर झरेपछि विद्यालयको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्यो ।
काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशस्थित सो विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा पुग्यो । अर्को विद्यालयमा गाभिनुपर्ने भयो । गाउँछिमेकको विद्यालय हट्ने कुराले स्थानीयवासीको मन कुँडियो । अघिल्लो पुस्ताको मेहनत र योगदान खेर जाने देखेर गाउँले निराश बने ।
दैलोको विद्यालय नचलेपछि पढ्न टाढा जान बाध्य बालबालिकाको पीडाले छोयो । अभिभावकको पनि मर्का बुझे । अझैपनि विद्यालय जोगाउन सकिन्छ की भनेर स्थानीयवासी लागिपरे । विद्यालय बचाउने जुक्ति निकाले । गाउँको सर्वपक्षीय भेला बस्यो ।
बन्दको मुखमा पुगेको विद्यालयलाई हरहालतमा जोगाउनेतिर भेलामा एकमत बन्यो । विद्यालयको दिगो व्यवस्थापन र पढाइको गुणस्तर सुधारमा स्थानीयवासी कस्सिए । जनप्रतिनिधिलगायत सामाजिक अगुवाले स्थानीयवासीको प्रयासमा आड र ढाडस दिए ।
एक वर्षको अन्तरालमा अहिले विद्यालयको मुहार बदलिएको छ । यसअघि कक्षा पाँचसम्म चलेको विद्यालयको स्तर घटाएर कक्षा तीनसम्म मात्र सञ्चालन गरिएपनि शून्यतिर ओरालो लागेको विद्यार्थी सङ्ख्या बढेर ४७ पुगेको छ । विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्न पाएका छन् । “विद्यालय बन्दै हुन आँटेको थियो, विद्यार्थी नै नभएपछि नचाहेर पनि अन्य विद्यालयसँग एकीकरण गर्नै पथ्र्यो”, प्रधानाध्यापक भीमबहादुर थापाले भने, “समुदायको पहलमा विद्यालय जोगिएको छ ।”
अङ्ग्रेजी माध्यमसँगै विद्यालयले सिकाइमैत्री वातावरण दिएपछि पढ्न अन्यत्र गएका बालबालिका पनि सोही विद्यालयमा पुनः फर्केका छन् । अभिभावकको चाहना बुझेर विद्यालयको भौतिकसँगै शैक्षिक सुधारमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षक खटिएका छन् ।
विद्यालयको आर्थिक सङ्कट टार्न अभियान चलाइएको छ भने शैक्षिक र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि शिक्षा समिति, आर्थिक समितिलगायत क्रियाशील छन् । विद्यालयलाई आर्थिकरूपमा उकास्न अभियान थालिएको आर्थिक संयोजक थमबहादुर थापाले बताए । विद्यालय सङ्कटमा फसेपछि स्थानीय साँघखोला–रातापहरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले यही वर्ष रु दुई लाख सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।
“गाउँको विद्यालय समस्यामा परेपछि वनको बैठक राखेर तत्कालै रु दुई लाख दिने निर्णय गर्यौ”, समूहका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले भने । उहाँले व्यक्तिगत रूपमासमेत रु ५० हजारको अक्षयकोष विद्यालयमा राख्नुभएको छ । यस्तै वडाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले पनि अक्षयकोषमा रु २५ हजार सहयोग गरेका छन् ।
अहिले अक्षयकोषमा रु एक लाख २५ हजार जम्मा भएको छ । वडा र गाउँपालिकामार्फत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक क्रियाकलापमा सघाइने वडाध्यक्ष लामिछानेले बताए ।
“स्थानीयवासी नकस्सिएका भए विद्यालय रहने थिएन, वडाकै अर्को परोपकार प्रावि पनि यसरी नै बन्द हुनबाट जोगिएको छ”, उनले भने । विद्यालयले विद्यार्थीलाई खाजा, पोशाक उपलब्ध गराउने गरेको छ । अभिभावकले आलोपालो गरेर विद्यालयमै आई खाजा आफैँ बनाएर विद्यार्थीलाई खुवाउँछन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बागलुङका प्रमुख कुष्मराज उपाध्यायले विद्यालय सुधारमा समुदायको योगदान अपरिहार्य रहेको बताए। उनले विद्यार्थी घटेपछि एकीकरणको अभियान चलिरहेका बेला विद्यालय जोगाउन समुदायले गरेको अगुवाइ प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे ।
“शिक्षा बिग्रिए सबै बिग्रन्छ, शिक्षालाई जगैदेखि सुधार्नुपर्छ”, उनले भने, “ठूलो भवन, कक्षाकोठा मात्र भएर पनि नहुने रहेछ, मुख्य कुरा विद्यालयमा सिकाइमैत्री वातावरण छ, छैन हेर्नुपर्छ ।” विसं २०४६ मा स्थापना भएको सो विद्यालयमा दुई दरबन्दी, एक राहत र चार निजी स्रोतका शिक्षक छन् ।
दरबन्दी कम हुँदा विद्यालयलाई अतिरिक्त आर्थिक भार छ । प्रअ थापाका अनुसार अझै पनि विद्यालय रु चार लाख घाटामा छ । “शैक्षिक वातावरणमा आएको सुधारले विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको भरोसा बढेको छ, अब आर्थिक र व्यवस्थापकीयरूपमा मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने ।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा गोकर्ण माविमा बस सेवा १ दिन पहिले
शिक्षकको अभावमा स्टोररुममा नै थन्किए कम्प्युटर ४ दिन पहिले
स्थानीय भाषा पठनपाठनका लागि शिक्षक नियुक्ति गर्ने तयारी ४ दिन पहिले
एक वर्षपछि खुले मनाङका विद्यालय ४ दिन पहिले
विद्यालयमा पढ्ने चिन्ताभन्दा घरको कामको चिन्ता बढी ५ दिन पहिले
देशभर ८१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि ५ घण्टा पहिले
कुटपिट गरी गर्भपतन गराएको आरोपमा तीन जना पक्राउ ५ घण्टा पहिले
ओली अरुको आलोचना सुन्न नसक्ने : प्रचण्ड ११ घण्टा पहिले
आँखा अस्पताल नजिकै युवक मृत फेला १२ घण्टा पहिले
पाँचथरका सबै गाउँपालिकामा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन १२ घण्टा पहिले
दुई महिनाभित्र आधुनिक सडक बत्ती जडान गरिँदै १२ घण्टा पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ? १९ घण्टा पहिले
भाेली पाँचौं संस्करणको ‘र्याली अफ होप’ हुँदै, विश्व नेताहरुले सम्बोधन गर्ने १९ घण्टा पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ? ३ दिन पहिले
हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्छौ : मुख्यमन्त्री पौडेल २ दिन पहिले
प्रचण्ड- नेपाल काठमाडौंमा ३ दिन पहिले
काेराेना विरुद्धको खोप लगाउनेकाे संख्या ४ हजार ५ सय नाग्यो ३ दिन पहिले
स्वर्गिय बुबाको स्मृतिमा पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना ७ दिन पहिले
हाम्रो सत्तामा ओली र देउवाले नख्खु जेलमा आराम गर्नेछन् : रवीन्द्र मिश्र ५ दिन पहिले
जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण ६ दिन पहिले
अढाई दशकपछि दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास ५ दिन पहिले
सर्वसाधारणलाई आईपीओमा लगानी गर्ने अवसरः तीन कम्पनीले निष्कासन गदैछन् प्राथमिक शेयर ? ४ हप्ता पहिले
आयुर्वेद औषधालयमा औषधिको अभाव, बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि ४ हप्ता पहिले
सर्वोच्चमा अबेरसम्म न्यायाधीशहरु छलफलमा, सुरक्षा व्यवस्था कडा ४ दिन पहिले
झुलाघाटमा सीमा सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न २ दिन पहिले
सुपर लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी ३ हप्ता पहिले
खडेरीका कारण दाङमा हिउँदे खेती प्रभावित ४ हप्ता पहिले
धितोपत्र बोर्डले भन्यो :– २५ प्रतिशत रकम ब्राेकरलाई अग्रिम बुझाउनु पर्छ भन्ने भ्रममा नपर्नुहाेला ४ हप्ता पहिले
कृषि क्षेत्र प्रर्वद्धनका लागि झण्डा महोत्सव १ दिन पहिले
गण्डकी अस्पतालमा आकष्मिक बाहेकका अन्य सेवा बन्द ८ महिना पहिले
नक्कली पत्रकार खाेज्दै प्रहरी ६ महिना पहिले
पथलैया ट्राफिकको असुलीधन्दा, कांग्रेस सांसद बानियाँको सेटिङमा भारबहन गाडीलाई फाइदै फाइदा ६ दिन पहिले
झन्झटिलो कर व्यवस्था सुधार गर्न व्यवसायीको माग २ वर्ष पहिले